Tsy mbola nahazo anarana : any amin’ny 1 300 km ilay andian-drahona | NewsMada
Tsy mbola nahazo anarana : any amin’ny 1 300 km ilay andian-drahona
Hitohy hatrany ny orana eto Antananarivo, anio. Raha mivadika ho rivodoza ilay andian-drano arahi-maso akaiky ny fivoarany, hijojo mandritra ny tontolo andro ny orana. Amin’izao fotoana izao anefa, maro sahady ny fokontany efa tondraky ny rano.
Mbola tsy nahazo anarana satria tsy nahafeno ny fepetra anasokajiana azy ho rivodoza ilay andian-drahona mitoetra any amin’ny 1 300 km avaratra atsinanan’i Madagasikara, omaly antoandro tamin’ny 12 ora, araka ny fanazavan’ny teknisianina ao amin’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, omaly. “Zone pérturbée” fotsiny ny sokajy misy azy hatramin’ny omaly ary arahi-maso ny fivoarany manomboka anio.
Vokatry ny “zone de convergence inter tropical” (ZCIT) izay latsaka ambany no mitondra ny orana saika manerana ny Nosy, ankoatra ny any amin’ny tapany atsimon’ny Nosy. Mahakasika ny faritra rehetra manomboka aty atsinanana ka hatrany andrefana ny ZCIT ary mipaka hatrany Afrika mihitsy. Mbola hitohy ny orana eto Antananarivo, anio amin’ny tapak’andro hariva, satria ao anaty fotoam-pahavaratra izao. Rehefa hiova ho rivodoza ilay andian-drahona, hijojo mandritra ny tontolo andro ny orana.
Manafosafo ny arabe ny rano eny amin’ny Marais Masay
Betsaka ny toerana miorina amin’ny faritra iva no tondraka sahady tao anatin’ny andro maromaro nilatsahan’ny orana. Efa manafosafo ny rano eny Marais Masay, omaly. Ahina handrakotra ny arabe mihitsy ny rano. Ireo fefy vy niaro ny mpitondra fiara sy mpandeha an-tongotra rahateo, nisy naka avokoa ka mety hanahirana ny hitondra fiara raha difotry ny rano ny arabe, indrindra aty amin’ny ilany havanana raha avy aty Andranobevava hivoaka ho eny Ankorondrano.
Eny Ambohitrimanjaka, betsaka ny tanimbary efa dibo-drano, nijinja vary sahady ny ankamaroan’ny tantsaha hisorohana ny fiavian’ny tondradrano hanimba ny varialoha efa nadiva ho masaka. Ny toerana fanaovana biriky rahateo, misy koa no efa dibo-drano amin’izao fotoana izao.